Ngubani ozoba ngukaputeni omusha wamaProteas? | Scrolla Izindaba
Ngubani ozoba ngukaputeni omusha wamaProteas?
Njengoba iqembu labesilisa lesizwe laseNingizimu Afrika lingenzi kahle kuze kube manje ohambweni lwabo e-Pakistan, kunolunye udaba oluhlupha imiqondo yabathandi bekhilikithi baseNingizimu Afrika.
Bayazibuzu ukuthi kazi ngubani ozothatha isikhundla sokuba ngukaputeni?
Ukaputeni wamanje uQuinton de Kock, osebenza kuwo womathathu amafomethi (okuyi-Test series, i-T20 ne-ODI), kungenzeka kufakwe omunye esikhundleni sakhe abe ngukaputeni uma i-National Selection Panel (NSP) ihlola lolu hambo.
Umqeqeshi oyinhloko wamaProteas, uMark Boucher uthe lolu daba mayelana ngokukhetha ukaputeni bazobhekana nalo ngokushesha uma iqembu libuya ngaphambi kokuvakashelwa iqembu lase-Pakistan eNingizimu Afrika ngoMbasa.
“Sinesikhathi esincane njengamanje ngaphambi kochungechunge lwethu olulandelayo lokuhlolwa. Singahlala phansi mhlawumbe senze isinqumo esiqinile sokuthi ngubani ozothatha izintambo [kuDe Kock],” kusho uBoucher.
Njengalo lonke uhambo, i-NSP ihlala phansi ihlaziye ngokuqinile lolu hambo lulonke olufaka, phakathi ezinye izinto, ukusebenza kweqembu nodaba olubucayi lokuthi ngubani ukaputeni.
UDe Kock wabamba iqhaza lokuba ngukaputeni isikhashana ngonyaka odlule ngoNhlolanja kulandela ukwehla ngokushesha kukaputeni wangaleso sikhathi uFaf du Plessis, okuyilapho i-Cricket South Africa (CSA) yathi babebheka umuntu olungele lo msebenzi.
Impumelelo yomdlali we-wicket-keeper-batsman oneminyaka engama-28 esikhathini sakhe esifushane ifaka phakathi ukuholela amaProteas ekuhluleni iSri Lanka ngochungechunge lwamaphuzu angu-2-0.
Kodwa-ke, kusukela lapho, izinto azimhambeli kahle uDe Kock.
Njengoba izinto zimile, akukho okuwahambela kahle amaProteas e-Pakistan, njengoba belahlekelwe i-Test ngo-2-0 ngesikhathi belandela ngemuva ngo-1-nil emidlalweni yokuqala ye-T20.
Kwamanye amagama aphonswa kulesi sigqoko kukhona: ovula izinduku uDean Elgar, uAiden Markram, uTemba Bavuma noRassie van der Dussen.